Resin FEP ugu Fiican (DS602&611) Soo saaraha iyo Warshada |Huaxia Shenzhou
Shayga Unug DS602 DS611 Habka/Heerka Imtixaanka
Muuqashada / Walxaha iftiimaya, oo leh wasakh sida wasakh bir ah iyo ciid, oo ka kooban walxaha madow ee muuqda boqolkiiba 1% HG/T 2904
Tusmada dhalaalaysa g/10 daqiiqo 0.8-2.0 2.1-5.0 ASTM D2116
Xoog Jimicsiga,≥ MPa 28 26 ASTM D638
Kordhinta xilliga nasashada,≥ % 320 310 ASTM D638
Cufis-jiidad Qaraabo / 2.12-2.17 ASTM 792
Meesha dhalaalaysa ℃ 265± 10 ASTM D4591
Sababta Fasaxa(106Hz),≤ / 7.0×10-4 ASTM D1531
Iska caabin Dilaaca Cadaadiska Kulaylka / dillaac la'aan HG/T 2904
MIT≥ wareegyada / ASTM/D2176
DS611: Cadaadiska kulaylka ee dillaaca balaastiig u adkaysta, badiyaa lakabka dahaadhka siliga iyo tuubo dhuuban.
DS602: Tusmada dhalaalaysa hoose iyo diiqada kulaylka dilaaca caaga qaabaynta u adkaysta, loo isticmaalo dilaacidda cadaadiska u adkaysta u baahan iyo socodsiinta xawaaraha hooseeya ama dhexdhexaadka ah, badiyaa loogu talagalay tuubooyinka kulaylka yareeya, bambooyin, valves, tuubooyinka iyo dahaarka, lakabka daboolka siliga.
1. Lagu soo xidhay bac caag ah oo midkiiba shabaq dhan yahay 25kgs.
2.Waxa lagu kaydiyaa meel nadiif ah, qabow oo qallalan, si looga fogaado wasakhaynta walxaha shisheeye sida boodhka iyo qoyaanka.
3.Nontoxic, non-flammable, aan qarxin, ma laha daxal, badeecada waxaa loo qaadaa si waafaqsan sheyga aan khatarta ahayn.
Hore: FEP Resin (DS610) ee lakabka dahaadhka fiilada, tuubooyinka, filimada iyo fiilada baabuurta